Maxamed Yuusuf Cartan | maktabadda | Af-Soomaaliga | Page 2
26/05/2017 Beerta XayawaankaMaxamed Yuusuf Cartanmaamul
Maxaa xayawaanka rafaad qabsaday, dhididse maxaa ka dhacay, markii ay is yidhaahdeen cawska baxay inta aydin goysaan soo hooya! Tacab koodiise laguma hungoobin. Abaalgud kiisa oo ahaa cawska oo xayawaanku ku soo hooyeen muddadii la filayey mid ka gaabanna waa la helay.
Hawlsha xayawaanku qabanayeen, marmarka qaar kood aad bay u ba’nayd. Qalabka ay ku adeeganayeenna waxa uu ahaa mid qaab daran oo Bani-aadmi loogu tala galay. Taas ayaa marar badan kala dhantaalshay dedaal kooda. Hase yeelshee, dhibaato kasta oo ka hor timaadda waxa had iyo jeer jid-bixiyeen uga ahaa fariidnimada doofaarrada. Kaalinta farduhuna waxay soo baxday markii ay muujiyeen sida ay beerta ugu yiqiinneen taako-taako. Muranna kuma jirin in farduhu uga xog ogaalsanaayeen Joonis iyo ciidan kiisaba siyaalaha cawska loo gooyo, loona tuumiyo. lyana waxa aan muran ku jirin doofaarrda oo isku koobay hawlsha oo ay kor meeraan iyo xayawaanka kale oo ay kala diraan. Haba yaraatee, doofaarradu ma qabaneyn wax hawl ah oo kaga dhididisa. Arrin lala yaabona ma ahayn haddii doofaarradu taabeen hoggaanka talada marka la tix geliyo aqoonta ay dheeraayeen xayawaanka kale. Waxa kale oo iyana aan la yaab lahayn in la arko Boskar iyo Koloofar oo iyagu isku xidhay birihii cawska goynayey iyo kuwii tuuminayey, doofaar amar siinaya oo cir kaas kaga qaylinayaana daba joogo isaga oo ku leh, “Horuu soco Jaalle!” ama “Joogso Jaalle!” hadba sida uu rabo. Kuwa wacdaraha dhigayna ma ahayn Boskar iyo Koloofar oo keli ah ee hawlsha beerta laga qabanayey looma kala hadhin. Iskaba daa kuwooda xoogga weynaa ee shinbirihiina waxa dilay sii-socod iyo soo-socod milicdii sidii ay afka ugu daldalayeen burar yaryar oo caws ah. Guud ahaanna dedaalkii xayawaanku waxa uu keenay hawlsha oo lagaga fara xalshay muddo laba maalmood ka gaaban intii Joonis iyo ciidan kiisu ku dhammeyn jireen. In taas waxa sii dheeraa cawska la soo hooyey oo noqday kii u fara badnaa ee weli giisba laga jaray beerta. Fara-badnaanta cawskana waxa u ahaa sabab indha-fiyoobaanta shinbiraha soo daldalay bur kasta, iyo xayawaanka kale oo mar kan ka caagganaaday cantuugadii ay hoosta uga qarin jireen.
Xagaagaas oo idil, si aan joogjoogsi lahayn baa hawlsha beertu u socotey. Xayawaanka beertuna waxa ay u badhbadhaadheen si aanay marnaba u maleyn in loo badhbadhaadhi karo. Cantuugo kasta oo jidiin kooda ka degta, si gaar ah ayay u dhadhdhansadeen, una macaansadeen, iyaga oo ogsoon in waxa ay cunayeen aanu ahayn wax yedle masuug ahi hor-Alle u baxsaday, ee uu yahay tacab kooda midha hiisii – tacab kaas oo ah mid iyagu ku dhibtoodeen, dheef tiisana maanta iyagu yeelsheen.
Sida xayawaanku u dhammaayeenna waxa ay wada ogsoonaayeen in waayidda la waayey wax-ma-tarihii Bani-aadmiga ahaa ee iyaga uun ku kor noolaa, keentay iyaga oo imminka hela cunto tii ka badan, iyo nasasho aanay hore u heli jirin. Ogow oo weliba si daas ayaanay weli u lahayn waaya-aragnimo ay keli good ku fuliyaan hawlaha.
Waaya-aragnimo la’aantaasuna waxa ay u keentay dhibaatooyin aan tiro lahayn markii ay damceen in ay tumaan galley da oo kala hufaan. Dhibaata daas waxay ka baxeen markii ay ku talshadeen in ay galleyda ku joogjoogsadaan, daba deedna ku neefsadaan si ay uga haadiyaan baalka. Cidhiidhi kasta oo ay galaan waxa had iyo jeer si daas oo kale uga saarayey fariidnimada doofaarrada iyo turuqyada Boskar ee laxaadka weyn. Boskarna si daas ayuu u noqday neef xayawaanku, sida ay u dhan yihiin, ku dhaadtaan oo laga majeerto beerta oo idil. Hawlkaranima diisuna ma ahayn mid cusub oo uu la soo baxay imminka, ee waagii Joonisba aad buu u shaqayn jirey. Hase yeelshee, intii xayawaanku la wareegay maamulka beerta ayuu bannaanka soo dhigay hawlkarnimo dheeraad ah, isaga oo imminka qabaneyey hawl ay qaban lahaayeen saddex faras. Marmarka qaar koodna waxa aad moodeysey in beerta oo idiliba ku tiirsan tahay garbaha Boskar ee laxaadka leh. Waaberiga sida uu u bilaabo hawlsha, waxa uu ka soo bixi jirey gabbalku marka uu dhaco, isaga oo maalin oo dhan ku jira riixis iyo jiidis, kol walbana ligan hadba meelsha hawlshu ugu kululshahay. Si daas ayuu weliba kula heshiiyey diigagga beerta mid ka mid ah in uu toosiyo goor saacad badhkeed ka horreysa waqtiga xayawaanka kale toosaan si uu uga sii gaadhsiiyo xoogaa iskaa-wax-u-qabso ah, inta aan hawlsha maalin taasi bilaabmin, ugana sii shaqeeyo hadba meelsha uu is-yidhaahdo, “Allay lehe halkan baa wax qabasho looga baahan yahay.” Dhibaato kasta oo ka hor timaadda iyo wax kasta oo dib u hakiya, jawaab keli ah ayaa Boskar u lahaa, taas oo ahayd: “Sidan si ka sii daran baan u shaqayn doonaa.” Markii danbena ereyya daas ayaaba u noqday halqabsi.
Dedaal kaas shaqada ku saabsanaa ee lala yimi kuma koobneyn Boskar oo keli ah ee xayawaan kastiba waxa uu geystay intii tamar tiisu ahayd. Shinbiraha beertuna waxa ay badbaadiyeen shan joonyadood oo galley ah oo lumi lahaa haddii aanay soo ururin midhihii firdhay. Niyadsamida guud ahaanba joogtey beerta waxa u marag ahaa sida xayawaanku u dhaqmayeen, iyaga oo mid koodna aanu wax xadin, waxna qawedin. Dagaalkii, qaniinyadii iyo xinkii u ahaa astaamaha nolol shooda hore, in ay tirtirmaan bay ku dhowaaden. Wax-qabasho kolka ay timaaddona, cidina hawlsha kama leexleexan jirin, amaba, sida loo badnaa, cidina kama leexleexan jirin, in kasta oo ay iska jirtey geenyada Moolli oo iyadu aan ku fiicneyn in ay aroortii waqti hore toosto. Had iyo jeerna, waxa ay ka dhigan jirtey cudurdaar in dhagax ka galay qoobka si ay shaqada uga baxdo goor hore. Bisaddu sida ay u dhaqmeyseyna waxay lahayd xoogaa shaki ah; maxaa yeelay, waxa la ogaaday in muuq qeeda la waayo goor kasta oo hawli jirto. Waxa iyana la ogaaday in, inta ay saacado badan iska maqnaato, goor dhow soo baxdo marka la gaadho waqtiga cuntada, amaba fiidkii goorta hawlaha la soo bogto. Waxay iman jirtey iyada oo aad mooddo in aanay waxba dhimin, lana diyaar ah cudurdaar wanaagsan oo ay soo sameysatay. Guux kalgacal leh oo debecsan marka ay raacisona, waxa adkaa in la beensado cudurdaar keeda. Waxa kale oo jirey Benjamin oo wax is-beddel ah aan muujin sidii kacaanku u dhalshay. Si diisii gaabiska ahayd ee waagii Joonisba uu hawlaha u fulin jirey ayuu weli wax u fulinayey; xil saarnaana kama warwareegin, hawl dheeraad ahna isuma dirin, Kacaanka iyo waxa uu keenayna kama bixin faallo. Kolkii la weydiiyey ee lagu yidhi, “Miyaanaad imminka ka farax badnayn waqtigii Joonis?” Waxa uu ku jawaabay, “Dameeraha cimri goodu aad buu u dheer yahay; waana aan hubaa oo mid kiinna ma arkin dameer baqtiyey.” Ciddii wax weydiisayna waxay ku khasabtay in ay ku qancaan jawaab taas maldahan.
Beerta xayawaanka waxa laga caadeystay in shaqada laga nasto maalmaha Axadaha. Si maalinta Axadda looga bogto hurdada, quraacda ayaa dib loo dhigi jirey saacad iska dhan. Quraacda marka la laasto ayaa la qabanqaabin jirey xus toddobaadkiiba mar ahaa oo sina aan u baaqan jirin. Xuska waxa lagu bilaabi jirey calanka oo la taago, kaas oo ka sameysnaa maro cagaaran oo ka duugowday afada Joonis. Isnoobool oo marada helay ayaa ku sawiray qoob iyo gees cadcad. Subax kasta oo Axad ahna, mara daas ayaa la sudhi jirey birta calanka ee beerta. Isnoobool oo fasirayey calanku waxa uu u taagan yahay waxa uu caddeeyey in midabka cagaarani u taagan yahay beeraha Iglan ee cagaarka ah, qoobka iyo geeskuna in ay u taagan yihiin Jamhuuriyadda Xoolaha ee soo bixi doonta goorta Bani-aadmiga loo af gembiyo si aanu ka saoo waaqsan. Calanka goorta laga soo jeesto, ayaa xayawaanka oo isku duubani aadi jireen xerada weyneyd ee shirarka iyaga oo qoob jac leh. Hal kaas ayay ku yeelan jireen Shirka Guud ee Toddobaadka. Hawlaha la doonayo in la fuliyo toddobaadka soo fool leh, shir kaas ayaa lagu qorsheyn jirey; arrimaha la rabo in laga doodo, shir kaas ayaa had iyo jeer la soo dhex dhigi jirey; go’aanna hal kaas ayaa lagu gaadhi jirey. Waxaase jirtey in doofaarradu ahaayeen kuwa goor walba soo jeediya arrimaha laga doodi doono. Xayawaanka kalese waxa ay yiqiinneen sida ay u bixiyaan codka oo keli ah. Arrin qudh ah oo ay shirka soo dhex dhigaan, haba yaraatee way ka fekeri kari waayeen. Marka doodi timaaddona, xayawaanka oo idil waxa ugu firfircoonaa Isnoobool iyo Naabooliyoon. Taas oo jirtey, ayaa haddana la arkay in laba doodu aanay marna wax ku heshiin, iskuna raacin. Iskaba daa wax kale oo ay isku raacaan, ee maalin laga doodayey arrin aan is-af-garasho-waaba keeni karin oo ahayd in jeexxa ah beerta tufaaxxa dhabar keeda, goonni looga dhigo xayawaanka gabooba ee ka fadhiista hawlsha, waxa laba dooda dhex maray muran kulul oo la galay da’da habboon ee nooc kasta oo xayawaanka ahi kaga fadhiisan karo hawlsha. Shirkana waxa joogto u ahaa in lagu xidho heesta ‘Iglan Xoola heedow’. Dharaarta Axadda gelin keeda danbe, cayaaraha ayaa loo daayey.
Arrinta oo hal kaas mareysa ayaa doofaaradu durba isa siiyeen qol uu oolli jirey qalabku. Hal kaas ayay xarun ka dhigteen. Habeennimadiina hal kaas ayay ku baran jireen tumaaladda, nijaaradda iyo farsamooyin kale oo lagama-maarmaan ahaa. Farsamooyin kaas waxay ka baran jireen buugag ay ka soo qaadteen guriga Joonis. Weliba Isnoobool waxa in taas u sii dheeraa isaga oo aad isugu shuqliyey in uu nidaamiyo xayawaanka oo u sameeyo wax uu ku magcaabay Guddiyada Xayawaanka. Hawlaha cayn kaas oo kale ahna, sina ugama daali jirin. Guddiyada uu abuuray waxa ka mid ahaa Guddida Ukun-dhalka oo uu u sameeyey digaagga, Ururka Dabooyinka Xalan oo lo’da uu u sameeyey, Guddida dib-wax-u-barka Jaallayaalsha Debed-Joogga ah oo ujeedda deedu ahayd in la rabbeeyo jiirka iyo bakaylayaalsha, Dhaqdhaqaaqqa Suufka Cad oo uu u sameeyey idaha, iyo guddiyaal kale oo jaad walba leh. In taas waxa uu ku darsaday isaga oo bilaabay casharro lagu baro xayawaanka sida wax loo qoro, loona akhriyo. Guud ahaanse, waxyaala haas Isnoobool bilaabay badi dooda lagama gaadhin guul. Tusaalena waxa innoogu filan waxxii ka dhacay markii la isku deyey in la hebediyo xayawaanka ah Debed-ku-noolka. Hal kaas waxa ka caddaaday in aan waxba iska doorin dhaqan koodii hore. Kolkii lagula dhaqmay deeqsinimo, ka faa’iideysta ma ahee, wax kaleba way garan waayeen. Bisaddiina waxa ay galshay Guddida Dib-wax-u-barka xayawaanka Debed-ku-noolka ah; dhawrkii maalmood ee horena aad bay u firfircoonayd. Hase yeelshee, maalintii danbe ayaa la arkay iyada oo ku fadhdhida guri dul shiisa oo shinbiro yaryaro ah u sheegaysa in xayawaan oo dhammi jaaleen, haddii ay rabaanna in ay u iman karaan oo ku fadhiisan karaan ciddiya heeda, iyaga oo waxba aan la yeelin. Shinbiruhuse isma dagin ee meel shooda bay ku ekaadeen.
In kasta oo aan lagu guuleysan arrimo badan oo Isnoobool abuuray, uuna is-lahaa wax ku hagaaji, waxa aad loogu guuleystay casharradii lagu baranayey sida wax loo qoro, loona akhriyo. Dayrtu kolkii ay soo galshay, ilaa heer ayaa badiba xayawaanku ka gaadheen sida wax loo qoro, loona akhriyo. Doofaarrada oo iyagu ka fahmo badnaa xayawaanka kale, markiiba waxa ay ku buxuuroobeen sida wax loo qoro loona akhriyo. Eydu sida ay wax u baratay aad bay u ladnayd, in kasta oo aanay u hayn xiisaba in ay bartaan wax dhaafsiisan sida loo akhriyo Toddobada Dardaaran. Ridii Mureel, akhriska ayay si ba’an u baratay oo eydaba iyada ayaa ka badin jirtey sida wax loo akhriyo; marmarna xayawaanka kale ayay u akhriyi jirtey habeenkii wargeysyada la xooray ee ay ka helsho kuddaafadaha. Dameerka Benjamin, doofaarrada ayuu kala sinnaa sida wax loo akhriyo, hase yeelshee, marna ma uu isticmaalin awood daas uu lahaa. Markii la weydiiyey sababta uu u isticmaali waayey awood diisaas, waxa uu meelshii ka caddeeyey in aanu ka war qabin wax istaahila in la akhriyoba. Koloofar, higgaadda oo dhan ayay baratay, waxayse awoodi weydey in ay xuruufta isku xidhiidhiso oo ereyyo ka sameyso. Boskarna waxa uu ka gudbi waayey afarta xaraf ee higgaadda u horreeya, kuwaas oo uu dhulka ku xarxarriiqi jirey, isaga oo qoobab kiisa waaweyn wax ku qoraya. Daba deedna inta uu hogto oo ku dhaygago waxa uu qoray, dhegahana u nabay dib, ayuu is-odhan jirey, “Tolow maxaa ku xigey?” Dhawr jeerna waxa uu ku guuleystey in uu barto afarta xaraf ee labaad. Hase yeelshee, taasi waxa ay keentay in uu illaabo afartii xaraf ee hore. Tala diisiina waxa ay isugu soo ururtay in uu ku ekaado afarta xaraf ee hore, kuwaas oo uu qori jirey maalintiiba mar ama laba jeer si uu isu xusuusiyo goor walba. Geenyada Moolli waxa ay iska soo taagtay in ay barato wax dhaafsiisan lixda xaraf ee magac ceedu ka koobnaa. Lix daas xaraf oo si fiican ay uga sameysay qoryo yaryar bay ku wareegaaleysan jirtey iyada oo isu bogsan.
Xayawaanka kale ee joogey beerta, waxa ay dhaafi kari waayeen xarafka B. Waxa iyana soo if baxay in xayawaanka kuwii u doqonsanaa ee idaha iyo shinbiruhu u horreeyeen korka ka qaban kari waayeen Toddobada Dardaaran. Isnoobool oo arrintaas si ba’an uga fekerey, waqti dheerna ku lumiyey, markii danbe waxa uu daaha ka qaaday in Toddobada Dardaaran lagu soo koobi karo halqabsi qudh ah, iyada oo ujeeddada dardaaranka aan waxba ka lumin. Halqabsigu waxa uu ahaa “Samaa Afar Lugood, Xumaa laba Lugood.” Meelshiina waxa uu ka caddeeyey in Mabda’a Xayawaannimaduba ku soo ururo halqabsi gaas qudh dhiisa; xayawaanka si fiican uga bogta halqabsigana, in uu ka badbaaday Bani-aadmi duufsada oo maskax diisa beddela.
Shinbirihii baa iyagu markiiba iska soo taagay halqabsiga cusub, iyaga oo ku dooday in iyaguba leeyihiin laba addin. Hase yeelshee, Isnoobool baa u caddeeyey in arrintu aanay ahayn sida ay is-moodsiiyeen; wuxuuna yidhi:
“Baalka shinbiruhu Jaallayaal, waa xubinjidhka ah oo wax riixda, waxna dhaqaajisa ee ma aha mid wax lagu qabsado. Si daas awgeed, waa in aynnu baalka u garannaa in uu la mid yahay addin. Bani-aadmiga astaanta u gaarka ahina waa gacanta, taas oo u ah qalab uu ku geysto waxyeello oo dhan.”
Ereyya daas waaweyn ee Isnoobool isticmaalay, wax aanay garan karin bay shinbirihii ku noqdeen. Faahfaahinta uu bixiyeyna sidii uu u yidhi bay u qaadteen. Xayawaanka kuwoodii fahmada darnaana markiiba waxay ku daadteen in ay korka ka qabtaan halqabsiga cusub. Halqabsiga oo far waaweyn ku qoran ayaa mar kaas lagu dhigay xerada lagu shiri jirey derbi geeda, iyada oo weliba lagu qoray meel ka sarreysa meelshii Toddobada Dardaaran ku qornaayeen. Idihiina, halqabsiga cusub oo ay korka ka qabteen ayay aad ugu riyaaqeen. Marar badanna waxa la arkayey iyaga oo beerta fadhfadhiya oo inta ay is-illaabeen la bacaac leh “Samaa Afar Lugood; Xumaa Laba Lugood,” taas oo ay ku celcelin jireen saacado iska dhan iyaga oo marna aan ka daalin.
Naabooliyoon, dheg uma dhigin waxyaalaha Isnoobool sameeyey. Waxaana laga sheegay in uu yidhi in dhallaanka oo wax la baraa ka door roon tahay wax kasta oo loo qabto xayawaanka waaweyn. Waqtiga uu si daas lahaa, labada eeyadood ee la kala odhan jirey Jesi iyo Buleebel, baa dhalay sagaal ey oo yaryar. Ey daas yaryar markii laga gooyay naaska, ayaa Naabooliyoon ka qaaday hooyooyin kood, isaga oo ugu ballan qaaday in waxbaris tooda iyo barbaarin tooda isagu xil qaadayo. Eydii yaryaraydna waxa uu dejiyey meel sare oo cidiba aanay gaadhi karin, iyada oo la dhigto sallaan bakhaarka qalabka mooyaane. Beerta in teeda kalena hal kaas ayuu kaga ooday. Mud do yar daba deedna, in ay jiraanba, waa la iska illaabay.
Arrintii ku saabsanayd meelsha ay maraan caanaha lo’du ee hore loo saari waayey, imminka ayaa la helay sir teedii, oo la ogaaday in caanaha lagu iidaamo soorta doofaarradu cunaan. Berya haas la helay caanaha sir tooda ayay bislaatay tufaaxxa intii u horreysey. Meel kasta oo beerta ahna waxa wadhnaa tufaax ay soo daadisay dabaylshu. Xayawaankana waxa ay la noqotay in loo siman yahay tufaaxxa oo caddaalad lagu qaybsan doono. Hase yeelshee, dharaar baa lagu bixiyey amar in tufaaxxa dabaylshu daadisay la soo ururiyo oo la isugu geeyo bakhaarka qalabka si doofaarradu u cunaan. Xayawaanka qaar kood ayaa ka gunuusay amar kaas cusub, in kasta oo gunuus koodu aanu waxba ka doorin arrinta. Naabooliyoon iyo Isnooboolna ku dar, oo doofaarradu waa u dhammaayeen arrinta; heshiisna waxa ay ku ahaayeen in si daas loogu taliyo tufaaxxa. Iskuwiilar oo afhayeen ahaan doofaarrada kale u soo dirteen si uu u dhacsiiyo xayawaanka arrinta waxa uu yidhi:
“Jaallayaal, kuma aan wado in ay din u maleyseen in aannu sidan u yeelnay hunguri weynaan, iimaan-darro, iyo mudnaan aannu idinka mudan nahay, doofaarrada haddii aannu nahay. Waxaana jirta in qaar badan oo naga mid ahi neceb yihiin caanaha cabbis tooda iyo tufaaxxa cunis tiisaba. Ujeeddada keli ah ee aannu ka leenahay caanaha cabbis tooda iyo tufaaxxa cunis tiisa waxa weeye in aannaan caafimaad darreysan. Caanaha iyo tufaaxxaba sida cilmiga saynisku sheegay, jaallayaal waxa ku jira waxyaalo lagama-maarmaan u ah fiyoobaanta doofaarrada. Doofaarrada haddii aannu nahayna, maskaxda ayaannu ka shaqeysiinnaa. Maamulka iyo habeynta beertuna annaga ayay nagu tiirsan yihiin, oo dan tiinna ayaa ku jirta in aannu dhanno caanaha, tufaaxxana cunno. Mase ogsoon tihiin, jaallayaal, waxa dhaci doona haddii doofaarradu ka soo bixi waayaan kaalin tooda? Aanba idiin sheego, ee Joonis baa soo laaban doona! Waana dhab in Joonis soo laaban doono haddii doofaarradu ka soo bixi waayaan xil kooda. Haddaba, jaallayaal, miyaynnaan meel uga soo wada jeedin in aan Joonis soo laaban?”
Fekrad keli ah oo xayawaanku ka sinnaayeen haddii ay jirtey, fekrad daasi waxa ay ahayd in aanu soo laaban Joonis. Kol kaas, haddii arrinta ku saabsanayd caanaha iyo tufaaxxa sidan loo rogay oo ay ku lug yeelatay Joonis soo-noqosha diisa, xayawaanka wax ay la noqotay in wax laga yidhaahdaaba aanay hadhin.
Waxa iyana meelsha uga muuqday xayawaanka, baahida loo qabo in doofaarradu had iyo jeer fiyoobaadaan. Dood kaleba iyada oo aan la yeelan baa bartii lagu guddoomay in loo dhowro doofaarrada caanaha iyo tufaaxxa dabaylshu daadisay iyo tufaaxxa kale ee go’i doonaba.
Saddex habeen kolkii laga joogey khudbaddii Duqqa Mijir, ayaa Duqqa Mijir si fudud hurdada ugu fiddigay. Meyd kiisiina waxa lagu aassay beerta tufaaxxa ag teeda.
Bilsha Maarj horraan teeda ayay ahayd goorta Duqqa Mijir geeriyooday. Saddexdii bilood ee ka danbeeyeyna waxa beerta lagu arkay dhaqdhaqaaq badan oo qarsoodi ah. Dhaqdhaqaa qaasi waxa uu ka abuurmay khudbaddii Duqqa Mijir oo xayawaanka in tooda garashada dheer bartay siyaalo hor leh oo nololsha loo eego. Hana moodin in xayawaan kaasi xog ogaal u ahaayeen goorta uu dhaci doono kacaankii Duqqa Mijir saadiyey. Sabab ay ku filaan in kacaan kaasi dhaci doono inta ay nool yihiinna ma jirin. Hase yeelshee, si cad bay xayawaan kaas ugu muuqatay in xil koodu yahay in ay is-diyaariyaan. Hawlihii ay la yimaaddeen waxbarista iyo isku-dubbaridka xayawaanku, si doodaba waxay dulsha ka fuuleen doofaarrada oo badanaaba loo aqoonsan yahay in ay u fariidsan yihiin xayawaanka. Doofaarrada beerta ku noolaana waxa ugu magac dheeraa laba doofaar oo qoodh ahaan loo dhaqayey, laguna kala magcaabi jirey Isnoobool iyo Naabooliyoon – laba daas oo Joonis damacsanaa in uu gado goorta ay si fiican u koraan. Naabooliyoon waa jimidh weynaa, arag giisuna, argagax aan yarayn buu cid walba gelin jirey. Caanna waxa uu ku ahaa in uu yeelsiin karo xayawaanka kale hadba sida uu rabo, in kasta oo aanu hadal badneyn. Naabooliyoon waxa aad uga duwanaa Isnoobool oo isagu aad buu uga weji furfurnaa, hadalka ka heli ogaa, wax-cusub-abuurkana kaga fiicnaa. Hase yeelshee, sina looguma wadin in raganima diisu u qota dheer tahay sida Naabooliyoon. Doofaarrada kale sida ay u dhammaayeen, waa wada dhufaannaayeen oo qalliin baa loo dhaqayey. Iyagana waxa u caansanaa ku yar oo buuran oo lagu magcaabi jirey Iskuwiilar. Iskuwiilar waxa uu lahaa caman buurbuuran, indho cadcad, soc-socod fudud iyo cod dhuuban oo xun. Waxa uu ahaa aftahan caado u leh in uu hadba dhinac u boodo, dibkana ruxo, kolka uu ka murmayo arrimaha qallafsan. Boodboodis taas iyo dib-lul kaasina waxay ahaayeen xeeladaha uu ku sasabto kuna qanciyo xayawaanka kale. Xayawaanka kalena waxay Iskuwiilar ku xaman jireen in muran kiisu, wax madow oo aad aragtid kaaga dhigi karo caddaan.
Saddex daas doofaar ayaa tifa tiray tusaalooyinkii Duqqa Mijir, kana soo saaray hab cusub oo loo fekero. Hab kaas cusub waxay ku magcaabeen Mabda’a “Xayawaannimada”. Saddex dooda ayaa toddobaadkiiba dhawr jeer shir u qaban jirey xayawaanka in tooda kale goorta Joonis hurdo. Mabda’a Xayawaannimadu waxa uu yahay ayay ku fasiri jireen shirka. Horraantiina waxa ay kala kulmeen xayawaanka dammiinnimo iyo xiisa la’aan ay u sabab ahaayeen xayawaanka qaar kood oo ka hadli jirey waajib kooda ah in ay daacad u ahaadaan Joonis – Joonis oo ay kol walba ku magcaabayeen “sayid keenna”. Qaar waxay ku dhawaaqeen hadallo bilow ah oo ay ka mid yihiin, “Joonis wax buu inna siiyaa, haddii uu innaga tagona macaluul baynnu u baqtiyi doonnaa.” Qaar kalena waxay soo jeediyeen su’aalo ay ka mid yihiin, ‘Maxay tahay danta innaga haysa waxa dhaci doona goorta aynnu dhimanno?’ amaba, ‘Sidee baa hawlgal keennu wax u kordhin doonaa, kolleyba haddii kacaanku iman doono oo lama-huraan yahay?’ Doofaaradiina, dhibaato weyn bay la kulmeen markii ay is-yidhaahdeen xayawaanka kale dhacsiiya in waxyaala haasi ka soo hor jeedaan, lidna ku yihiin Mabda’a Xayawaannimada. Su’aalaha u doqonniino weynaa waxa weydiisay Moolli, geenyadii caddayd. Su’aal sheeda hore ee Isnoobool ay u soo jeedisay waxay ahayd, “Kacaanka ka bacdi, sonkor ma la helayaa?”
Isnoobool oo si baas ugu gubaya hadalka ayaa su’aal shaas ka jawaabay oo yidhi, “Mayya, oo beertu ma leh alaab lagu samayn karo sonkor. Midda kalena, maxaadba ku falaysaa sonkor, adiga oo heli doona caws iyo midho hadba inta aad ka rabto?”
Moolli oo jawaabta la siiyey deeqi weydey ayaa su’aal sheedii sii wadatay oo tidhi, “Ma la iise oggolaan doonaa in aan sii galshanaado boqorradan iigu shaqlan guudka?”
“Jaalle,” ayaa Isnoobool ugu jawaabay, “boqorra daas aad caashaqsan tahay waa astaamaha addoonsiga. Malaha garaad uma lihid in xornimo ka qiima badan tahay boqorro la xidhto?”
Hal kaas ayaa Moolli ku garowsatay jawaabtii la siiyey in kasta oo aanay u dhawaaq ekeyn sidii wax la qanciyey.
Dhibaatooyinka ay keentay doqonniinada xayawaanku kuwo ka sii daran baa doofaarradu la kulmeen kolkii ay is-yidhaahdeen ka hor taga beenta uu faafinayey Moosis. Moosis waxa uu ahaa coomaaddihii Joonis u rabbeystay sida gaarka ah. Waxa uu ahaa fariid hadal yaqaan ah in kasta oo uu ahaa basaas warsheeko badan. Moosis waxa uu ku doodi jirey in ay jirto arlo dahsoon oo lagu magcaabo ‘Buurta Sonkornacnac’. Arla daas, sida Moosis yidhi, xayawaanka oo dhan baa aada goorta ay dhintaan. Waxa kale oo uu sheegay in arla daasu ku taal meel uu ku tilmaamay cirka, oo sida uu yidhi, xoogaa ka sarreysa daruuraha. Arla daas Buurta Sonkornacnac, sida Moosis yidhi, lagama shaqeeyo, iyada oo weliba sonkorkhaanta iyo waxyaalaha kale ee macmacaani hawl-yari uga dhex baxaan oodaha kala qoqoba guryaha iyo beeraha. Xayawaanku aad bay u necbaayeen Moosis, maxaa yeelay, afka uun buu ka noolaa ee wax hawl ah ma qaban jirin. Taas oo jirtey ayaa haddana xayawaanka qaar kood rumeysnaa in ‘Buurta Sonkornacnac’ ee Moosis sheegay jirto. Taas ayaa doofaarrada ku sandulleysay in ay si kulul uga doodaan in meel magac caas la yidhaahdaa aanay jirin.
Xayawaanka ku daba tukaday doofaarrada waxa u sii hanuunsanaa labada faras ee Boskar iyo Koloofar. Labadaba waxa dhib ku ahaa in ay is-kooda u fekeraan. Taas ayaa keentay in ay doofaarada ka dhigtaan macallimiin tooda, duuduubna ku leqaan wax kasta oo doofaarradu u sheegaan. Leqis taas ay leqayeen wax kasta oo doofaarradu u sheegaan, iyagu iskuma koobin, ee weliba si daas ayay ugu sii gudbinayeen xayawaanka kale wax kasta oo ay ka maqlaan doofaarrada, iyaga oo si bilow ah uga doodaya arrimaha qallafsan. Shirarka qarsoodiga ah ee xerada weyn lagu qaban jireyna sina labada faras ugama maqnaan jirin; heesta ‘Iglan Xoola heedow’ oo shirarka lagu xidhi jireyna iyaga ayaa hor kaci jirey.
Arrimaha oo isaga socda si doodaas, ayuun baa mar keli ah wax is-beddeleen oo kacaankiiba lagu gaadhay muddo ka gaaban intii la filayey, dhabbo toobiye ahna loo maray. Sababta keentay in arrimuhu si daas la-yaabka leh mar keli ah isu beddelaan waxay ku lug lahayd Joonis iyo is-beddelka ku dhacay dabeecad diisa. Nin kaas Joonis, in kasta oo beryihii hore uu ahaa sayid qallafsan, haddana waxa uu ahaa nin beeraley ah oo karti leh. Berya han danbese waxa la soo gudboonaaday waqti xun oo uu sabab u ahaa kiis maxkamadeed oo laga helay, lacagina kaga baxday. Taas ayaa keentay in uu niyad jabo oo caadeysto khamriga oo si xad dhaaf ah uu u cabbo. Kolkol buu dhawr maalmood oo isku-bixis ah wargeys uun akhrisan jirey inta uu isku kala bixiyo kursi dheer oo guriga u yiil. Wargeys uu akhristo, khamri uu cabbo, iyo Moosis oo afka uu ugu guro kibis qallalan oo khamri uu daray ma ahee, wax kale ma uu qaban jirin maalma haas. In taas waxa u sii raacay, ciidan kiisa oo ahaa kuwo wahsi dilshooday, daacadnimaduna ku yar tahay. Si daas aw geed ayaa haramo u buuxisay beeraha, guryuhu u baahdeen in saqafyo cusub la saaro, oodihii beeruhu u dar xumoodeen, xayawaankana loo siin waayey cunto ku filan.
Xaaladda beerta oo si daas ah ayaa bilsha Juun soo galshay. Waqtigii la goyn lahaa cawska beeraha ka baxay, si daas ayuu u soo dhowaaday. Haddaba iyada oo maalintu tahay Sabti, berrina xagaagu kala badh noqon doono, ayaa Joonis u dhaadhacay magaalada Wellindhon. Daba deedna waxa uu si baas ugu sakhraamay makhmarad ahayd magaalada oo magac ceedu ahaa ‘Libaaxxa Cas’. Si daas dar teed ayay u suura geli weydey in uu ku soo laabto beerta waqti ka horreeya maalintii Axada duhur keeda. Ciidan kiisiina, inta ay lo’dii liseen subaxnimadii Axadda, ayay ugaadhsi aadeen iyaga oo aan isku shidin in ay siiyaan xayawaanka wax ay cunaan. Goortii Joonis soo laabtay, isaguna hoosba uma deyin xaaladda beertu ku sugan tahay, ee markiiba waxa uu lac yidhi kursi ballaadhan oo guriga u yiil, wejigana waxa uu iska saaray wargeys ka mid ah kuwii uu akhrisan jirey. Si daas ayaa arrintu isugu soo biya shubatay xayawaanka oo weli xereysan oo qadtan gabbalku markii uu dhacay. Intii ay adkeysteen in ka badan kolkii xayawaanku adkeysan kari waayeen, ayaa sac lo’da ka mid ahi gudaha isugu celiyey irriddii bakhaarka cawska. Hal kaas ayaa xayawaanku sidii ay u dhammaayeen ku wada haliileen oo isku marti qaadeen cawskii ku kaydsanaa bakhaarka. Isla mar kaas ayaa Joonis ka soo baraarugay hurdada. Cabbar yar daba deedna, isaga iyo afartii nin ee ciidan kiisa ahaa oo jeedallo lalansanaya ayaa soo daf yidhi bakhaarka. Jeedallada oo dhinac walba ay u saydhayaan bay xayawaanka kula soo dhex dhaceen. Waxxii ay meelsha ka geysteen waxa uu noqday wax xayawaankii gaajeysnaa u dul qaadan kari waayeen. Xanafta jeedallada markii ay u adkeysan kari waayeen ayay mar keli ah kula jeesteen, Joonis iyo ciidan kiisa, in kasta oo si daas in la yeelo aan hore loogu sii heshiin. Joonis iyo ciidan kiina si lama-filaan ah ayay ugu war heleen herdi iyo danbaabidho kaga imanaya gees walba. Waxay arkeen in xaalku aad ugu xun yahay oo ay u maara la’ yihiin xayawaanka. Aadna waxa uga sii yaabiyey gadood kan ay la yimaadeen xayawaankii ay u uleyn jireen, una hagardaameyn jireen hadba sida ay rabaan. Dhiidhdhi gan xayawaanku dhiidhdhiyeen ee wax la mid ah aanay u soo joogin weli good iyo waaq qood, ayaa Joonis iyo ciidan kiisa geliyey fuleynimo ay la fekeri kari waayeen. Cabbaar yar markii ay is-tiileen, hase yeelshee ka quusteen in ay muquuniyaan xayawaanka, ayay cagaha wax ka dayeen. Muddo yar daba deedna shan toodiiba waxay cagta saareen dhabbo gaadhi-farasku la baxay oo ku darmeysey waddada weyn, iyaga oo xayawaanka guuleystay cagta cagta u saareen.
Afadii Joonis, daaqadda ayay ka daawanaysey waxyaala haas dhacayey. Sida wax u socdaan kolkii ay aragtay ayay alaab teeda qaar ka mid ah degdeg ugu boobtay kiish ay lahayd oo sijaayad ka sameysnaa. Daba deedna waxay ka dustay irrid beertu ku lahayd xagga danbe. Moosisna inta uu ka soo balow yidhi udubkii uu ku fadhdhiyey ayuu daba galay Afada Joonis isaga oo ka bafbafsiinaya baalalka, si aad ahna u ciyaya. Intii Afada Joonis iyo Moosis si daas yeelayeen ayaa xayawaanku ka caydhiyeen beerta Joonis iyo ciidan kiisiiba, iyaga oo shan toodiiba cagta u saaray waddadii weyneyd ee ahayd beerta debed deeda. Daba deedna irridda ayay ka soo xidhteen. Si daas ayaa kacaankii u hir galay iyada oo cidiba aanay weli dhaadin in kacaan dhalshay. Si daas ayaa Joonis u huleelay, Beertii Maanorna u noqotay meel xayawaanka u ah hanti.
Cabbaarkii hore oo dhan, xayawaanku way u qaadan waayeen cawa dooda. Wax ay falaanna waxa ugu horeeyey dhabaabaco ay ku soo mareen soohdinta beerta, taas oo aad moodeysey in ay ku hubinayaan in wax Bani-aadmi ahi aanu ku dhuumaneyn meel keli ah oo beerta dhul keeda ah. Daba deedna waxay u soo beratameen aqalladii beerta si ay u tirtiraan raadka uu ka tegey xukunkii Joonis ee la necbaa. Iyaga oo aan hakanba, waxay jebiyeen qolkii qalabka ee ka shisheeyey xerada fardaha. Qalab meel shaas yiil oo ay ka mid ahaayeen xakamayaalsha, giraangiraha sanka, silsiladaha eyda, iyo mindiyaha matudhooyinka ahaa ee Joonis ku dhufaani jirey doofaarrada iyo wananka, dhammaan tood ceel bay gundhada u dhigeen.
Keenooyinkii, hoggaammadii, indhasaabkii iyo koleyydii sanka loo gelin jirey ee ahaa astaamaha gumeysiga, dhammaan toodba waxa lagu riday meelsha qashinka lagu qubo oo mar kaas dab ka oognaa. Jeedalladii oo olol qabsaday markii ay arkeen, farxad bay isla haysan waayeen oo bartii bay cayaar ka ag qabsadeen. Waxa kale oo Isnoobool ku ridey dabka boqorradii fardaha lagu qurxin jirey maalmaha la aadayo suuqqa. Dabka goortii uu ku ridayeyna waxa uu yidhi:
“Boqorradu in ay yihiin dhar waa in loo gartaa; dharkuna waxa uu ka mid yahay astaamaha Bani-aadmiga. Xayawaanku sida ay u dhan yihiin waa in ay muddugnaan ku socdaan.”
Hadalka Isnoobool markii uu maqlay ayaa Boskar la soo booday koofiyad yar oo isagu lahaa. Koofiyaddu waxa ay ka sameysnayd caws oo xagaaga ayaa duqsiga loogaga celin jirey dhegaha. Hal kaas ayuu iyadiina ku riday dabka.
Tirtiris taas xayawaanku tirtirayeen wax kasta oo xusuusinayey Joonis, kama qaadan waqti badan. Markii ay ka soo jeesteen ayaa Naabooliyoon, sidii ay u dhammaayeen, u hor kacay bakhaarka cawska, hal kaas oo mid walba loo laba laabay sedkii hore loo siin jirey; eydiina mid walba sed kiisa loogu daray laba midh oo buskud ah. Kolkii la fuleyna, toddoba jeer oo aan loo nasan ayaa la qaaday heesta ‘Iglan Xoola heedow’ intii aan la kala hoyan. Hurdo macaan oo abid kood aanay hore u seexan bay habeen kaas wada seexdeen.
Waagu markii uu beryey ayaa xayawaanku u soo tooseen si doodii hore; hase yeelshee, markiiba waxa ay xusuusteen guulshii raacday shalay. Si daas markii ay xusuusteen ayay u wada yaaceen beeraha daaqqa. Meel aan si daasba u sii fogeyn oo beeraha daaqqa ag tooda ahayd ayaa waxa ahaa taag yar oo dhulka beerta in tiisa kale si fiican looga arko. Taag gaas fiiq qiisa ayaa xayawaanku is-tubeen. Aadna waxay ugu dhaygageen beerta hor tooda fidsanayd baaxad weynaan teeda. Iyaga oo si daas u dhaygagsan ayay maskax dooda ku soo dhacday in wax kasta oo hor tooda ahba iyagu iska leeyihiin. Fekraad daasi markii ay ku dhalatay ayaa jibbo daf tidhi xayawaanka. Jibbadii baa markiiba madax martay oo kobtii bay ka bilaabeen garmaameyn ay farxad iskula meereysteen, booddaaleysi ay hadba cirka isku ganeen, dooggii udgoonaa oo ay cancantuugeen, dharabkii oo ay ku galgalsheen, iyo beerta ciid deedii madoobeyd oo ay fufujiyeen oo udug geeda ka buuxsadeen sanbabbada. Markii jibbadu ka yara jabtay oo ay yara xasileen ayay beerta oo idil kormeer ku mareen. Amankaag iyaga oo la yeedhi la’ ayay soo sahamiyeen qaybahii kala duwanaa ee beerta oo dhan: Qayba heeda la falo, qaybaha cawsku ka baxo, kuwa dhirtu ka baxdo, beerta tufaaxxa iyo balliga biyaha. Ilaa waqti gaasna waxa ay u qaadan la’aayeen in wax kastiba yihiin yed dooda.
In taasi markii ay dhacday ayaa xayawaanku isa soo daba galeen oo ku soo laabteen aqalladii beerta. Guriga Joonis bay mar kaas is-hor tubeen. “Kanna idinka ayaa iska leh,” ayay is-yidhaahdeen markii ay isa soo hor tubeen guriga. Si daas ha is-yidhaahdeen, ee haddana aad bay uga maageen, ugana cabsadeen in ay galaan guriga. Cabbaar markii ay taagnaayeen ayaa Naabooliyoon iyo Isnoobool is-booxbooxeen oo inta ay garbaha ku dhufteen irriddii, gudaha isugu celiyeen. Si daas ayaa xayawaanku ku galeen gurigii Joonis, iyaga oo dhuukinaya oo midba kan kale daba joogo si waxna aan meel shiisa looga dhaqaajin. Hadba qol bay ka baxeen oo mid kale galeen iyaga oo qoobabka caara dooda ku soconaya, hoosna u xanshashaqaya. Guriga buruud kiisa baa sida ay u dhammaayeen taabtay. Qol kasta oo ay galeen waxa ay la dhaygageen raaxada taal meelsha; aadna waxay ula sii yaabeen sariiraha furshaan toodu ahayd baalka, muraayadaha, kursigii ballaadhnaa ee ka samaysnaa saynta fardaha, qaddiifadaha iyo Boqorraddii ‘Fiktooriya’ sawir keeda saarnaa kabadh meelsha yiil dul shiisa. Iyaga oo mar kaas uun ka dayma sugtay gurigii Joonis, xatabadana maraya oo is-leh baxa, ayay tebeen geenyadii Moolli. Dib markii ay u noqdeen, waxay Moolli ka heleen qolalka hurdada kii u fiicnaa, iyada oo boqor buluug ah ka qaadatay miis ay ku lebbisan jirtey Afada Joonis oo inta ay boqor kaas la sintay garba heeda, isla baxday oo isku jamaneysa muraayadda. Bartii baa xayawaanka kale si kulul ugu canaanteen oo baxeen. Xoogaa hilib doofaar ah oo ka lulshey madbakhkha, markii ay sii baxayeen bay sii qaadeen oo aas geeyeen. Haantii biirahana Boskar baa ku sii af gembiyey danbaabidho. Alaabtii tiil guriga ee kalese far lama taabsiin. Go’aan arrin taas ku saabsan oo la isku wada raacayna bartii baa lagu gaadhay, go’aan kaas oo ahaa in guriga laga dhigo meel loo daawasho tago oo lagu kaydiyo waxyaalaha ku saabsan hiddaha, dhaqanka, iyo taariikhda. Isla mar kaas ayaa xayawaanku sida ay u dhammaayeen isku raaceen in xayawaan oo idili ka caagganaadaan guri gaas u-hoyasha diisa.
Xayawaanka oo mar kaas quraacday ayaa Naabooliyoon iyo Isnoobool mar labaad isugu yeedheen. Isnoobool oo hadalka qaadtayna waxa uu yidhi:
“Jaallayaal, lixdii iyo badhkii aroornimo ayaynnu joognaa. Maalin dheerina waa innaga horreysaa. Maantana wax aynnu bilaabeynaa cawska goyn tiisa. Taase wax ka horreeya arrin kale oo u baahan in la saaro gacanta.”
Shir kaas ayaa doofaarradu ka muujiyeen in ay barteen sida wax loo qoro, loona akhriyo, saddexdii bilood ee tegey (saddexdii bilood ee ka soo wareegay habeenkii Duqqa Mijir jeediyey khudbad diisii caanka ahayd). Waxay ka barteen buug higgaadda ah oo ay ka dhex heleen kuddaafadda. Buugga waxa lahaan jirey Joonis carruur tiisa. Mar kaas ayaa Naabooliyoon cid u diray in la keeno dheryo rinji cad iyo rinji madoobi ku jireen. Rinjiga markii la keenay buu xayawaanka u hor kacay irriddii beerta ee hore looga soo xidhtay Joonis iyo ciidan kiisa. Isnoobool oo doofaarrada u badin jirey sida wax loo qoro ayaa mar kaas, inta uu qanjaafilaha ku qabsaday burush, tirtiray magaccii beerta ee ahaa ‘Beerta Maanor’. Magaccu waxa uu ku qornaa irridda dul sheeda. Halkii uu magacca ka baabi’iyeyna wax uu ku qoray ‘Beerta Xayawaanka’, magaccaas cusub oo uu sheegay in uu noqon doono magacca beerta loogu yeedhi doono imminka iyo waxxii ka danbeeya. In taas markii ay bogeen ayay ku soo laabteen aqallada beerta. Hal kaas ayaa Naabooliyoon iyo Isnoobool mar labaad adeegsadeen xayawaanka kale oo imminkana ku amreen in ay la kaalayaan sallaan. Sallaanka la keenay waxa lagu tiiriyey xeradii lagu shiri jirey derbi geeda. Xayawaanka kalena hal kaas ayay ku ogaadeen in doofaarradu, saddexdii bilood ee tegey, ku guuleysteen in ay Mabda’a Xayawaanimada ku soo koobaan Toddoba Dardaaran. Toddoba daas Dardaaran oo sida la yidhi, noqon doona sharci aan sina loo doorin karin oo xayawaanku ku dhaqmaan, ayaa la doonayay in lagu qoro derbiga. Isnoobool oo dhibaato aan yarayn la kulmay baa mar kaas fuulay sallaanka. Iskuwiilarna dhawr tallaabo ayuu ka hooseeyey oo dheryaha rinjiga ayuu u hayey.
Toddobadii Dardaaran oo xuruuf waaweyn oo cad cad ku qoran ayaa Isnoobool kol kaas ku dhigay derbigii madoobaa. Waaweynaan iyo cadcaddaan inta xuruuftu ka qabtey, waxa laga akhriyi karayey meel u jirta soddon tallaabo. Derbiga waxa uu ku qorayna waxay ahaayeen:
1. Laba-addinle waa nacab.
2. Afar-addinle iyo haad waa saaxiib.
3. Xayawaanku waa in aannu galshan dhar.
4. Xayawaanku waa in aannu ku seexan sariir.
5. Xayawaanku waa in aannu cabbin khamri.
6. Xayawaanku waa in aannu nafta ka goyn mid kale.
7. Xayawaan oo idili waa siman yihiin.
Farta uu ku dhigay Dardaarannada aad bay u habeysnayd, higgaadduna waa wada toosnayd, ereyga ‘Saaxiib’ oo xuruuf tiisa uu is-dhaafiyey iyo xarafka ‘s’ oo uu u dhigay si gurracan ma ahee. Goortii uu ka soo jeestay derbiga, ayuu kor u akhriyey dardaaranka si uu ula socodsiiyo xayawaanka kale waxa uu qoray. Xayawaanku inta ay le’ekaayeen madaxxa ayay u wada ruxeen; waxxii uu qoray oo dhanna way ku raaceen. Kuwooda fahmada badnaana markiiba waxay bilaabeen in ay korka ka qabtaan Dardaaranka. Isnoobool oo shirka xidhayeyna waxa uu yidhi:
“Imminkana jaallayaal, innagu dhaqaajiya cawska; ballanna aan ka dhiganno in aynnu ku soo hoynno cawska muddo ka gaaban intii Joonis iyo ciidan kiisu ku soo hoyn jireen.”
Dhaqaaqa, markii la is-yidhi ayaa saddexdii sac, oo goorahanba xamxamaaranayey sara joogsadeen oo ci’ oodda ka qaadeen. Sababta ay la ciyayeen waxay ahayd iyaga oo saddex caana maal dihnaa, kuna sigtay in candhooyinku la dildillaacaan caano. Cabbaar yar haddii laga fekeray sida arrin taas wax looga qaban karo ayaa doofaarradu cid u direen in la keeno baaldiyo. Baaldiyada kolkii la keenayna, qanjaafilaha ayay ku liseen lo’da. Hal kaasna wax ay ku ogaadeen in qanjaafilo hoodu si fiican ugu habeysan yihiin in lagu liso lo’da. Shan baaldi oo xoor leh ayaa laga buuxiyey lo’da; shan taas baaldi oo xayawaanku u wada hunguroodeen. Xayawaanka mid ka mid ah oo is-haysan kari waayeyna waxa uu yidhi:
“Tolow wax xan oo caano ah maxaa lagu sameyn doonaa?”
Digaagad su’aalshu dhiirri gelisay baa u jawaabtay oo tidhi, “Marmarka qaar kood baa Joonis noogu iidaami jirey soorta.”
In taas markii la is-dhaafsaday ayaa Naabooliyoon halka ka soo booday. Inta uu isa soo barbar taagay baaldiyadii caanaha, ayuu cir kaas ka qayliyey oo yidhi: “Shaqo ayaa laga qaban doonaa caanaha, hadal-hayn tooduna wax innooguma jilna ee cawska la goynayo dhakhso ha loo aado. Hawlsha waxa idiin hor kaci doona Jaalle Isnoobool, aniguna goor dhow ayaan idinka daba iman doonaa. Horuu soco, Jaalle! Cawskii waa inna sugayaa e.”
Askar sida ay yihiin baa loo dhaqaajiyey xayawaanka oo caws-goyn la aadsiiyey. Markii ay soo laabteen fiidkii, waxay ogaaden in caanahii muuq qooda la waayey.
Ninkii la odhan jirey Mistar Joonis ee lahaa beerta lagu magcaabo ‘Beerta Maanor’ ayaa habeennimadii quful ku soo jebiyey xeryihii digaagga. Hase yeelshee, khamrigii uu iska badiyey ayaa illowsiiyey in uu sii xidho daloollada laga eego xayawaanka xereysan. Isaga oo kaalmeysanaya weegaartii iftiinka ahayd ee faynuuskii uu sidtey sameeyey ayuu mar kaas sii dhacdhacay qolqolka isaga oo leexaysanaya. Irriddii danbe ee guriga markii uu gaadhay, kabihii ayuu iska dhilliyey. Haan biire ku jirey oo qolka weyn tiilley ayuu mar kaas ka shubtay bakeeri isaga oo is-leh kaasi ha kuugu danbeeyo. Bakeeri gaas markii uu laacay ayuu ku ciiray sariir tiisa oo afa diisu durba ka sii khuurineysey.
Iftiinkii ka baxayey qolka Joonis seexdo markii uu demey ayaa nuuxnuuxsi, dhaqdhaqaaq iyo baalal bafbaf toodu saameeyeen beerta oo dhan. Sababtu waxay ahayd iyada oo maalinnimadii la isku sii war geliyey in Duqqa Mijir ku riyooday xalay riyo amankaag leh. Duqqa Mijir waxa uu ahaa doofaar cad oo qoodh ah, billadona ku helay bandhigyadii xoolaha ee la geeyey. Wuxuuna rabey in uu gaadhsiiyo xayawaanka kale riya diisu waxa ay ahayd. Si daas ayaa la isu sii war geliyey in lagu kulmi doono xerada weyn ee beerta, goorta uu horreysa ee Joonis aanu ka dhoweyn meelsha. Duqqa Mijir had iyo jeer magac caas ayaa loogu yeedhi jirey in kasta oo magacca lagu geyn jirey bandhigga xoolaha ahaa Quruxdii Magaalada Wellindhon aad baa looga qadderin jirey beerta. Si daas dar teed, xayawaanku waxay u wada diyaar ahaayeen in ay saacad hurda seegaan si ay u dhegeystaan waxa uu odhan doono.
Xeradaas weyn ee lagu shirayey waxay lahayd meel ka taagan xerada in teeda kale oo rako oo kale ah. Hal kaas ayaa Duqqa Mijir soo kuududsaday isaga oo caws u goglan yahay, faynuusna kor sudhan yahay. Duqqa Mijir waxa uu ahaa laba-iyo-toban-jir ay fuulshay baruur dheeraad ahi beryahan danbe. Taas oo jirtey ayuu haddana weli lahaa muuqqii boqor lahaan jirey. Weji giisana waxa ka muuqdey murti-badni iyo raxmad, in kasta oo foolalsha dhaadheer aan laga gaabin marna. Muddo yar daba deedna, xayawaankii baa ku soo qulqulay xerada lagu shirayey, hal kaas oo koodii yimaaddaaba u fadhiistay sidii uu jeclaa. Waxa u soo horreeyey saddexdii ey: Buluubel, Jesi iyo Binjar. Waxa ku xigey doofaarrada oo iyagu dul kamandhuudhsaday caws goglanaa meel xerada xag geeda hore ah oo rakada aad ugu dhow. Digaaggu waxay fuuleen daaqadaha iyo irridaha dul shooda. Lo’dii iyo idihii waxay fadhiisteen meel ah doofaarrada dhabar kooda oo kolkiiba bilaabeen calalnaqsi. Labadii faras – Boskar iyo Koloofar – ee gaadhi-faraska jiidi jirey, dhuukin bay ku soo wada galeen, iyaga oo aad uga digtoon meelsha ay qoobabka dhigayaan si aanay ugu tuman xayawaanka yaryar ee laga yaabo in ay ku qarsoon yihiin cawska hoos tiisa. Koloofar waxay ahayd geenyo shilis oo fildhexaad u saaran cidhifka. Afar-dhal keeda dabadiina waxa ka lumay sabarkii ay lahaan jirtey markii ay ugbeyd. Boskar se waxa uu ahaa faras aad u weyn oo joog giisu ku dhow yahay siddeed iyo toban taako, laxaad kiisuna u dhigmo laba faras laxaad kooda oo la isu geeyey. Waxa uu lahaa oog cad oo kaga dhereran sanka, oog taas oo Boskar u yeelshay arag doqonniino*. Sida runtu ahaydna, Boskar laguma xaman jirin fahma-badni iyo maskax-wanaag midna. Hase yeelshee, xayawaanku sida ay u dhan yihiin waxay Boskar ku qadderin jireen degganaanta dabeecad diisa iyo hawlkarnima diisa. Labada faras waxa daba joogey ridii caddayd ee Mureel iyo dameerkii Benjamin. Benjamin dhif iyo naadir buu yeedhi jirey. Kolka uu yeedhona waxa uu badanaaba nololsha ka abbaari jirey dhinacca gurracan. Benjamin haddii lagu yidhaahdo: dabada waxa Eebbe kuu siiyey in aad iskaga hirto duqsiga, waxa ka suuroobi lahaa in uu yidhaahdo, “Oo maa duqsiga iyo dabadaba la naga deysto.” Taas waxa u sii dheeraa isaga oo ahaa xayawaanka keli ah ee beerta ku nool ee weligiis iyo waaqqiis aan qoslin. Haddii sababta la weydiiyeyna, wax uu ku jawaabay in wax lagu qoslaaba aanay jirin. Dabeecad diisa oo si daas u adkeyd, ayuu haddana u daacad ahaa Boskar, in kasta oo isagu marna aanu arrin taas qiran. Maalmaha Axadaha ee hawlsha laga nasanayo, waxa labadu wada joogi jireen jeex ahaa beerta tufaaxxa shisha deeda, hal kaas oo ay aamusnaan isku barbar daaqi jireen.
Labada faras oo mar kaas uun fadhiistay ayaa xayn is-daba guureysa oo dhallaanka shinbir-badeedda ahi soo galshay xerada. Xayntu, mid hore u rajowday bay ahayd. Iyaga oo jiiqjiiq leh oo hadba dhinac isu gurdan raacaya ayaa shinbirihii yaryaraa daydaydeen meel ay fadhiistaan oo aan lagu tuman karin. Tamar-darri dooda markii ay aragtay ayaa geenyada Koloofar ugu sameysay jeenya heeda xero ay dhex galeen oo durbadiiba ku gam’een. Waqtigii loo ballamay shirka oo wax door ahi aanay ka hadhin ayay soo galshay Moolli, geenyadii caddayd ee nacasta quruxda badan ahayd, Joonisna u jiidi jirtey gaadhiga uu fuulo. Waxay soo galshay iyada oo is-luleysa, kuus sonkor ahna qadhiidheysa. Sidii ay u soo socotey bay fadhiisatay meel ah xerada xag geeda hore. Markii ay fadhiisatayna waxay bilowday guud keeda cad oo ay lulsho, iyada oo yididdiilo ka qabta in indhaha xayawaanka kale qabtaan boqorka cas ee guud keeda ku shaqlan. Ugu danbeystii, waxa soo galshay bisaddii oo sida caada deedu tahay daydayatay meelsha ugu dugsoon xerada. Go’aan keedii waxa uu noqday in ay isku cidhiidhido Boskar iyo Koloofar dhex dooda, hal kaas oo ay raalli ku noqotay, kana gurxantay muddadii Duqqa Mijir jeedinayey hadal kiisa oo dhan, iyada oo erey keli ah aan ka dhegeysan waxa uu ku hadlayey.
Si daas ayaa xayawaaka beerta oo idili u wada yimaaaddeen, Moosis ma ahee. Moosis waxa uu ahaa coomaadde la rabbeeyey oo ku guud seexan jirey udub ku quturan irridda danbe ee guriga Joonis hor teeda. Duqqa Mijir goortii uu arkay in la wada meel samaystay oo waxa uu odhan doono loo wada feejig yahay, ayuu qufac yar ku bannaystay dhuunta. Hadal kiisii buu mar kaas bilaabay; wuxuuna yidhi:
“Jaallayaal, waydin wada maqalsheen in aan ku riyooday xalay riyo amankaag leh. Aniga oo goor dhow idiin sheegi doona waxay ahayd riyadu ayaan jecleystay in aan ka horreysiisto arrin kale. Jaallayaal, kuma wado in aan idinla sii joogi doono bilo badan. Si daas dar teed bay ila noqotay in waajib kaygu, inta aanaan dhiman, yahay in aan idiin soo gudbiyo waxxii aan murti hantiyey. Sida aydin wada og tihiinna, muddo dheer baan noolaa, waqti badan oo aan ku fekerona waan haystey in tii aan jiifey xera dayda. Mudda daana, nololshu waxay tahay aad baan uga fekeray. Imminkana waxay ila tahay in aanu jirin xayawaan keli ah oo iiga aqoon badan nololshu waxa ay tahay.
“Haddaba jaallayaal, maxay tahay nololshan aynnu nool nahay? Runta haddii aan la iska indha saabin, nololsha aynnu nool nahay waa mid silic, saxariir iyo rafaadba leh, oo gaaban. Nolol sheennuba waxay ka kooban tahay innaga oo dhalanna; inta aynnu nool nahay, innaga oo la inna siiyo cunto wax-tar keedu ku kooban yahay jidhka iyo lafaha oo ay isku hayso; innaga oo kuweenna awoodda leh lagu dirqiyo in ay adeegaan ilaa la gaadhsiiyo meelsha u danbeysa itaal kooda; innaga oo naxdin-la’aan birta la inna mariyo marka aan faa’iido danbe innagu hadhin. Si daas ayaan xayawaan keli ah oo Iglan ku nooli u aqoon badhaadho iyo nasasho waxa ay yihiin. Si daas ayaan xayawaan keli ah oo Iglan ku nooli u madax bannaaneyn, si daas ayaa nololsha xayawaanku nool yihiin u tahay silic iyo addoonsi. Runta oo qayyaxani waa si daas.
“Haddaba aan is-weydiinno, ee ma waxay si daas ku noqotay dabeecadda iyo nidaamka adduunka oo si daas wax u habeeyey? Ma dhul keennan baa sabool ah oo, kuwa ku kor nool, aan u awoodi karin nolol sharaf leh? Maya, jaallayaal, kun jeer baan leeyahay maya! Ciidda Iglan waa mid wax ka baxaan, hawa deedu waa mid wanaagsan, awoodna waxay u leehday in ay soo saarto cunto ka fara badan xayawaanka eegga ku kor nool. Beer teenna keli geed waxay hayn kari lahayd laba iyo toban fardo ah, labaatan lo’ ah, iyo tirooyin ido ah, iyaga oo ku wada nool nolol leh raaxo iyo sharaf ka ballaadhan wax aynnu imminka ka fekeri karno. Haddaba, sababta aynnu nololshan silicca leh ugu waareynaa maxay tahay? Sababtu waxa weeye iyada oo Bani- aadmi innaga wada xado tacabka hawl sheennu dhaliso wax yar ma ahee. Hal kaas weeye, jaallayaal, barta laga heli karo jawaabta dhibaatooyin keenna. Erey keli ah ayaa lagu soo koobi karaa dhibaatooyin keenna oo idil – erey gaas oo ah: Bani-aadmi. Bani- aadmi waa nacab keenna keli ah ee dhabta ah. Bani-aadmi ka fogee meelsha, wax la waayi doonaa wax kasta oo sabab u ah macaluul sheenna iyo luufluuf keennee.
“Bani-aadmi waa san-ku-neeflaha keli ah ee wax cuna isaga oo waxba aan soo saarin. Caano lagama maalo, ukun ma dhalo, itaal uu beeraha ku qodo iyo dheereyn uu bakaylaha ku qabsado midna ma leh. Haddana, Bani-aadmi waa sayidka xayawaanka. Isaga ayaa xayawaanka hawl geliya, daba deedna isaga ayaa xayawaanka kale dib ugu soo celiya cunto inta u yar ee macaluul- u-baqti ka baajisa. Inta kalena isaga ayaa la hadha. Xoog geenna ayaa ciidda qoda, saala deenna ayaa nafaqaysa; haddana, innaguma jiro mid keli ah oo haysta wax maqaar kiisa dhaafsiisan. Lo’dan i hor joogtaay, immisa kun oo galaan oo caano ah ayaa la idinka lisay sannaddii tagtay? Maxaase ku dhacay caana haas aydin ku kobcin lahaydeen weyla hiinna? Dhibic wal oo caana haas ahi waxay martay jidiinka nacab keenna. Idinka digaagow, intee baydin ukun dhalsheen sannadkan? Ukun taase intee baa ka dillaacday? Intii dillaacday ma ahee, intii kale oo dhan waxa la geeyey suuqqa, si ay ugu soo hoyso lacag Joonis iyo ciidan kiisa. Adigan Koloofar ahna, aaway afar taadii qayli ee duqnima daada u noqon lahaa taageero iyo farxad? Gu’-jir baa mid walba lagu gaday. Mid koodna weligaa dib u arki meysid. Muxuuse noqday abaalgudkii afar-dhal kaaga iyo hawlaha aad ka qabato beerta? Cunto yar iyo xero-faras mooyaane wax kale ma ka haysaa?
“Iyada oo si daas ah, ayaan haddana nolol shaas silicca leh loo oggoleyn in ay dhammaysato geda heeda. Anigu haddii aan iska hadlo, kolleyba caban maayo oo laba iyo toban gu’ baan ka gooyey baarka, carruur boqol kor u dhaaftayna waan dhalay. Laba iyo toban guna waa inta ay ku sugan tahay nololsha doofaarku. In kastaba ha gaadhdho nololsha xayawaanku, ee kolleyba waa tii dhegta dhiigga loo daray. Idinka doofaarradan gabannada ah ee hilibka loo dhaqo ina hor fadhdhiyow, mid wal oo idinka mid ahba sannadku inta aannu dhammaan baa sariibadda naftu cabaad kaga bixi doontaa. Dhammaan teenna cidhib-xuma daas ayaynnu ku danbayneynaa: lo’, doofaar, digaag iyo ido, mid kasta aan ahaannee. Fardaha iyo eyduna ma aayatiin dhaamaan xayawaanka kale. Adigan Boskar ah, maalinta u horreysa ee muruq yadaadu debcaan ayaa Joonis kaa iibin doonaa farda-qalaha; kaas oo ku gowrici doona, kuna karkarin doona si ay kuu cunaan eyda lagu ugaadhsadaa. Eydu goorta ay duqoobaan oo ilka beelaan, Joonis inta uu qoorta ugu xidho dhagax, ayuu ku hafiyaa balliga ugu dhow.
“Haddaba jaallayaal, miyaanay dharaar ka caddayn in ilsha ibtilooyin keennu ka soo burqanayaan tahay dulmiga Bani-aadmiga? Ha huleelo Bani-aadmi, si aynnu u hantino midhaha tacab keenna; ha huleelo Bani-aadmi si aynnu, habeeniyo dharaar dhex dooda, u noqonno hodon madax bannaan. Maxaa haddaba innala gudboon? Maxay kale oo aan ahayn in aynnu habeen iyo dharaar awood deenna isu geynno, una halganno af-gembiga Bani-aadmiga!
“Jaallayaal, waa kaas dardaaranka aan idiin soo jeedinayaa: Kacaan weeye arrinta innala gudbooni! Mana ogi goorta kacaan kaasi iman doono. La arkee in uu yimaaddo toddobaad kan guda hiisa, lana arkee in uu qaadto boqol gu’. Waxa aanse hubaa, sida aan u hubo in uu jiro caws kan addima dayda hoos goglani, in caddaaladi hir geli doonto ha dheeraato muddadu, hase dhowaatee. U feejignaada arrin taas jaallayaal, muddada gaaban ee aydin nool shihiin. Feejigaanta ka sokow, dardaaranka u tebiya kuwa idinka danbeyn doona si filalka danbe u wadaan halganka, ilaa ay guuleystaan.
“Xusuusnaada, jaallayaal, oo waa in aan marna niyad-jab idinku dhacin. Muran iyo tusaaleyn kastaa waa in aanay idin habaabin, dhegna waa in aydaan u dhigin kolka ay idiinku sheekeeyaan in Bani-aadmi iyo xayawaan dan wadaagaan oo badhaadhaha mid kood helaa tahay kan kale badhaadha hiisa. Been weeye wax xaas oo dhammi. Dan la wadaagaana ma jirto. Bani-aadmina uma adeego dan aan tiisa ahayn. Ogaada oo xayawaan haddii aynnu nahay, waa in halgan keennu innagu dhex abuuraa midnimo iyo jaallanimo saxar la’. Ogaada oo Bani-aadmi meel uu joogoba waa col, xayawaanna waa wada jaallayaal.”
Hadalkii Duqqa Mijir oo hal kaas maraya ayaa xayawaankii mar keli ah buuq isku wada dareen. Malaha intii Duqqa Mijir hadlayey ayaa afar jiir ka soo baxeen godad koodii. Qaarka danbe inta ay ku soo fadhiisteen ay ay hadalka dhegeysteen. Jiirka arag giisii baa haddaba wax lama-filaan ah ku noqday eydii. Qabsada, markii ay is-yidhaahdeen ayaa jiirkii degdeg libiq ugu yidhaahdeen godad kooda si ay u badbaadiyaan nafa hooda. Duqqa Mijir baa mar kaas raafka kor u taagay si loo aamuso; wuxuuna yidhi:
“Jaallayaal, waxa inna hor taal arrin mudan in meel la isla dhigo. Aan is-weydiinno, ee xayawaanka debed-joogga ah ee jiirka iyo bakayluhu ka mid yihiin, ma innala saaxiib baa, mise waa innoo nacab? Cod aan u qaadno arrin taas. Su’aalsha aan shirka soo dhex dhigayaana waxa weeye: Jiir ma yahay jaalle?”
Hal kii baa cod degdeg ah lagu qaaday. Badina waxa la isla oggolaaday in jiir yahay jaalle. Afar diidmo oo keli ah ayaa jirey. Afar taas diiday jaallanimada jiirka waxay kala ahaayeen saddexda ey iyo bisadda. Mar danbena waxa la ogaaday in bisaddu labada dhinacba’ siisay codka. Duqqii Mijir ayaa daba deed hadal kiisii wadtay oo yidhi:
“Wax yar uun baa ii hadhay in aan idhaahdo. Waxa aan idinku adkeynayaa in aydin weli giin xusuusnaataan waajib kiinna ah neceybka Bani-aadmiga iyo dhaqan kiisa. Xusuusnaada oo laba- addinle meel uu joogoba col baynnu nahay; afar addinle iyo haadna saaxiib baynnu nahay. Iyana xusuusnaada oo dagaalka aynnu Bani-aadmi la galnaa yaanu Bani-aadmi innoo ekeysiin. Ha qaadanina waxyaalaha uu ku camal falo goorta aydin Bani-aadmi jebisaan. Xayawaan waa in aanu weli giis ku noolaan guri, ku seexan sariir, galshan dhar, cabbin khamri iyo buuri, taaban lacag, ganacsina gelin. Ogaada oo caadooyinka Bani-aadmiga oo idili waa saancad. In taas oo dhan waxa ka sii weyn, in xayawaanna aanu dulmin mid kale. Ogaada oo mid itaal daran iyo mid itaal weyn, mid xeel dheer iyo mid kaleba, walaalo ayaynnu wada nahay. Xayawaanna waa in aanu mid kale ka gelin dhagar. Xayawaan oo idili waa siman yihiin.
“Imminkana, jaallayaal, wax baan idiinka sheegayaa riya daydii xalay. Riyadu sidii ay ahayd idiin kuma tilmaami karo. Waxay ahayd riyo ku saabsan sida dunidu noqon doonto goorta Bani- aadmi la waayo. Waxay i xusuusisay waxyaalo aan beri hore illaabay. Waxay i xusuusisay waqti hore oo imminka laga joogo guyaal badan, aniga oo gaban ah, oo hooyaday iyo doofaaradaha kale ku heesayaan hees gabowday oo ay ka yiqiinneen codka iyo saddexda erey ee u horreeya. Anigu dhallaannima daydii baan codka maqli jirey oo iqiin; hase yeelshee beri hore ayuu ka baxay maskax dayda. Xalay baase codkii iigu yimi riyada. Soo-laabashada codka waxa ka sii darnaa midhihii heesta oo dhan oo iyana igu soo duxay – midho aan hubo in ay yihiin kuwo xayawaankii hore ku heesi jirey, hase yeelshee muddo dheer la hilmaamay. Imminkana jaallayaal, hees taas ayaan idiinku heesayaa. Duqna waan ahay oo cod kaygu xabeeb buu leeyahay. Hase yeelshee idinka ayaa si fiican ugu heesan doona kolka aan idin baro codka. Heesta wax la yidhaahdaa ‘Iglan Xoola heedow.'”
Mar kaas ayaa Duqqii Mijir dhuunta ku banneystay qufac yar oo bilaabay heestii. Sidii uu sii sheegay, xabeeb baa cod kiisu lahaa; hase yeelshee si aad u ladan buu ugu luuqeeyey. Luuqda heestu waxay ahayd mid dhiigga dhaqaajinaysa, midha heeduna waxay ahaayeen:
Iglan xoola heedow, Ayrlaan ku weedow,
Idil adduunya deennana, ood kastaba ku noolow,
Akhbaar farax ileeyoo, aaya heenna dahabka ah,
Imaatin kiisa sheegay, si aad ah u dhegeyso.
In kastaba ha raagtee, way iman ayaaniyoo,
Dhibaha aadmi gaas wada, afgembi baa ku dhaciyoo,
Iglan beera heedaas, anfaaci goodu badan yahay,
Aadmiga la’aantiis, asal keen baa u hadhiyoo.
Adayg-badan giraangir ah, sanka iga aroorsheen,
Udubka adhaxda lay sudhay, had walba ku adeegona,
Way aasmi doonaan oo, arag good la waayiye.
Xakamaha af kaygiyo, ilka hayga gaamuray,
Irbadaha i mudmudayee, orod igaga doonaan,
Isticmaal la’aantuba, aayar way u daxaleyn,
Ma-arxame karbaashkana, eedaad kiisu waa hadhi.
Hodonnimo intay tahay, astaame heedu koobneyn,
Sarreen aan in yar ahayn, heed aad u tira badan,
Cawska udugga badaniyo, ootis aan xadba lahayn,
Digirta ayni geediyo, alaab aanan tirin karin,
Innagaa u aayiyoo, ubad keenna dhaxalsiin.
Iglan beera heedaas, iftiin baa dhammaynoo,
Biyuhuna intii hore, waa ka arag samaanoo,
Ur waxay mudteeniyo, usgaggu waa ka teigiyoo,
Eeggaan xorownona, ufo caafimaad oo,
Ka udgoon intii hore, ooga deenna mariyoo.
Idilkeen haddaan nahay, in kastay ogaal tahay,
Oogsashada aroor taas, hor teed aynnu eber nahay,
Ujeeddada ayaan taas, waa in loo adeegoo,
Ka-xorow addoonsiga, awood weyn la saaraa.
Si aad ah u dhegeysoo, akhbaar taydan nololshiyo,
Aaya heenna dahabka ah, imaatin kiisa sheegay,
Arlo intaad degtaaniyo, adduunyada ku faafiyoo.
[‘Oats’ (oo u dhigmaysa – ootis) waa erey Ingiriisi ah oo ogaan meelshiisa aannu ugu deynnay; waana midho u baxa sida qamandida oo laga sameeyo boorijka.]
Heesta la heesay ayaa xayawaanku la wada jibboodeen. Duqqa Mijir oo heesta dhammaad keediiba aan gaadhin, ayaa xayawaanku markiiba bilaabeen in iyagu heesaan. Cid kaleba iska dhaaf, ee ku woodii u dammiinsanaa baa qabtay luuqda heesta iyo dhawr erey oo midhaha ka mid ah. Ku woodii fahmada badnaa, sida doofaarrada iyo eyda, cabbaar yar haddii la joogeyba, midhihii heesta oo dhan bay ka hayeen korka. Dhawr jeer oo tijaabo ah markii la sameeyey ayaa lagaga dayyaamiyey heesta ‘Iglan Xoola heedow’ iyada oo si aad ah la isula helay. Lo’, ey, ido, fardo iyo shinbiro, mid kastiba waxa uu heesta ku qaaday cod kiisa u gaarka ah. Dhammaan toodna si aad ah ayay heesta u jecleysteen oo waxaba suuroobi lahaa in ay heesta wadaan habeenku sida uu u dhan yahay haddii aan laga soo dhex gelin.
Nasiib-darri dooda, dayyaankii heesta ayaa baraarujiyey Joonis oo kol kiiba ka soo booday sariirta. Waxa uu mooday in dawaco soo galshay qolqolka oo soo dhufsaday bunduq had iyo jeer ugu tiirsanaan jirey qolka uu seexdo. Sidii uu tooganayo mugdiga habeenka ayuu mar kaas is-raaciyey dhawr xabbadood, ku waas oo isku aasay xerada lagu shirayey derbi geeda. Si daas ayaa shirkii loogu kala yaacay iyada oo xayawaan kastiba u cararay meelshii uu seexan jirey. Shinbiruhu markiiba waxay u balow yidhaahdeen daloolladii ay seexan jireen; xayawaanka kalena waxay ku wada kor xasileen cawskii u ahaa gogolsha. Muddo yar daba deedna beerta oo dhanba waa laga hurdey.
Farax weyn ayay noo tahay in aannu markii u horreysey u soo bandhigno dadka ku hadla Af Soomaaliga, buuggan magaciisu yahay ‘Beerta Xayawaanka’ (Animal Farm).
Buugga waxa ku qoray Af Ingriisi nin magaciisa la odhan jirey Erik Aartar Beleer (Eric Arthur Blair) oo magacca uu wax ku qoraa ahaa Joorj Orwel (George Orwell), dhalashadiisuna ahayd Ingiriis. Orwel waxa uu ku dhalshay dalka Hindiya markii sannadku ahaa 1903, halkaas oo aabbihii ka mid ahaa shaqaalaha Dawladda Ingiriiska oo u talin jirey Hindiya berigaas. Sannadkii 1907 ayaa reerkii ku soo laabtay Iglan, isagiina halkaas ayuu ka galay dugsiyada ilaa uu ka baxayey dugsiga sare ee Iiton 1921. Sannadkii ku xigeyna waxa uu galay ciidanka Bileyska ee Barma oo iyana Ingiriisku u talin jirey. Toddoba sannadood buu u shaqeynayey ciidanka Bileyska Barma.
Wax Orwel qoro oo soo baxa waxa u horreeyey maqaal uu ku qoray jariidad Faransiis ah sannadkii 1928. 1929 kii markii uu ku soo laabtay Iglan, macallin u shaqeysta is-kiis oo guryaha wax ugu dhiga dadka ayuu noqday. Dabadeedna cabbaar buu dugsi wax ka dhigay. Hase yeelshee, markii caafimaad kiisu u oggolaan waayey in uu sii wado macallinnimada ayuu iska daayey. Guryaha buugagga lagu gado mid ka mid ah ayuu markaas ugu shaqeeyey kaaliye aan joogto ahayn. Dabadeedna jariidad buu u shaqeeyey oo u ahaa faalleeyaha buugagga cusub ee soo baxa. Shaqadaas ayuu hayey ilaa 1940kii.
Sannadkii 1936 dabayaaqadiisii, Orwel waxa uu aaday dalka Isbeyn si uu halkaas uga soo dagaallamo isaga oo barbar kala soo jeedey qoladii u dagaallamaysey si ay Isbeyn uga dhigaan Jamhuuriyad. Halkaas ayaa Orwel lagu soo dhaawacay. Dagaalkii Labaad ee Adduunkana waxa uu ka mid ahaa ciidan loogu tala galay in ay waddanka ka ilaaliyaan gudaha. 1940 – 1943kii waxa uu ka shaqeynayey Qaybta Dalalka Bariga ee Idaacadda Bii.Bii.Sii.
Wargeyska la yidhaahdo Tribyuun (Tribune) oo qaybtiisa suugaanta uu tifatire ka ahaana, bog buu si joogto ah ugu qori jirey faallo la xidhiidhdha suugaanta iyo siyaasadda. Sannadkii 1945 Wargeyska Obsaafar (Observer) buu u noqday weriye uga soo warrama dagaalkii markaas socdey; dabadeedna si joogto ah buu wax ugu qori jirey wargeyska Wararka Galabta ee Manjestar (Manchester Evening News).
Orwel waxa uu qabey qaaxo. 1947 – 1950kii cisbitaalka ayuu marna gelayey, marna ka soo baxayey. Waxa uu dhintay 1950kii isaga oo lix iyo afartan jir ah.
Buugag badan baa Orwel qoray intii uu noolaa. Hase yeelshee, waxa uu ku noqday caan labada buug ee la kala yidhaahdo ‘Beerta Xayawaanka’ iyo ‘1984’ – labadaas buug oo mid walba laga iibiyey buugag kor u dhaafay laba malyuun.
‘Beerta Xayawaanka’, oo ah buuggan aannu markii u horreysey ku soo ban dhigaynno Af Soomaali, waxa uu ka sheekeynayaa sida koox xayawaan ah oo ku noolayd beer mar keli ah uga gilgilatay dulmigii Bani-aadmigu ku hayey. “Kacaan weeye arrinta innala gudbooni,” markii ay yidhaahdeen, ayay dabada kaga dhaceen Bani-aadmigii addoonsan jirey ee iyaga uun ku kor noolaa. Hase yeelshee, yididdiilo kasta oo hore ay u qabeen iyo himilo kasta oo ay lahaayeen waxa ay baabe’een markii xukunku u galay gacanta koox xayawaanka ka mid ah oo taladeedii noqotay been, musuqmaasaq, dil iyo argagixis ay kula kaceen xayawaanka kale. ‘Bulshadii sinnaatay ee ka xorowday gaajo iyo karbaash, bulshadii mid kastiiba shaqeynayey inta tamar tiisu tahay, bulshadii kooda xoogga weyni ilaalinayey kan taagta daran’ ee ay higsanayeen waxa ay ku danbeysey ‘goor ey bahalo ah oo gurxamayaa meel la arko ku meereystaan; goor ay cid walba sandulle ku noqotay in ay daawadaan jaallayaal shooda oo hor tooda xubin-xubin loogu jarjarayo’.
Dhaqanka Soomaalidana kuma ah wax cusub in xayawaanka laga hadliyo sida buuggu uga hadalsiinayo oo kale; sheekooyin badan oo dhaqanka Soomaalida ku jiraana waxa ay ku saabsan yihiin xoolaha la dhaqdo iyo habar-dugaagga, oo labaduba si aad ah ugu xidhan yihiin nololsha dadka. Hase yeelshee, dhaqannada dadyowga adduunka ee kala geddisan, iyo sida dhaqan kastiba u arko xayawaanka ku dhex nool (sida dhaqanka uu ka mid yahay ninka buugga qoray) ayaa keeni kara, in dad badan oo buugga akhriyayaa saari waayaan kaalinta doofaarrada. Horraantiiba waxa aannu ku sii baraarujineynaa dadkaas in ay jiraan dhaqanno la dhaqdo doofaarka, sida Soomaalidu u dhaqato xoolaha, hilib kiisana la cuno, in kasta oo caano aan laga maalin. Waxa kale oo aannu ku baraarujineynaa in dhaqannadaas qaar ka mid ahi aqoonsan yihiin in doofaarku u fariidsan yahay xayawaanka, iduhu u doqonsan yihiin, farduhuna u dammiinsan yihiin.
Qoraalka Af Soomaaliga ayaannu iyana xoogaa ka odhanaynaa. Marka u horreysaba mahad weyn baannu u celineynaa Guddida Far Soomaalida ee soo gaadhsiisay qoraalka afka heerka uu maanta marayo; iyo dadka badan ee kale ee guddida aan ka mid ahayn, hase yeelshee, aan dedaal koodu sina uga yarayn dedaalka guddidu la timi. Waxba annaga oo aan ku sii dheeraan ayaannu aqoonsan nahay in abaal-gud koodu iman doono goorta ummadda Soomaaliyeed la soo noqoto awood ay ku abaal mariso ninkii wanaag u galay iyo kii xumaan ka galayba.
Markii aannu isku daynay in aannu buuggan u beddelo Af Soomaali, haddiiba waxa aannu ku dhufannay foodda dhibaatooyin badan oo la xidhiidha qoraalka Afka. Dhibaatooyin kaas waxa u horreeya xuruuf ay nala noqotay in ay laba laabmaan sida: ‘dh’da,’x’da, ‘q’da, ‘c’da iyo ‘h’da. Xuruuf taas oo dhanna waannu laba laabnay goor kasta oo ay nala noqotay in ay u baahan yihiin laba-laabid. ‘Dh’da haddii aannu ku horreynno, dhibaatada ‘dh’da laba laabantaa waxa ay u gaar tahay dadka ku hadla ‘dh’da oo ka duwan kuwa ku hadla ‘r’da meelaha la isku beddelo ‘dh’da iyo ‘r’da. Waxa ay nala tahay in dadka ‘dh’da ku hadlaa leeyihiin ‘dh’ culus iyo ‘dh’ fudud; halka dadka ‘r’da ku hadlaa ka leeyihiin ‘dh’ culus oo keli ah. Meelaha dadka ‘dh’da ku hadlaa ka isticmaalaan ‘dh’da fududna, dadka ‘r’da ku hadlaa waxa ay ka isticmaalaan ‘r’. Sidaas darteed ayaan dadka ‘r’ da ku hadlaa u baahnayn in ay laba laabaan ‘dh’da; dadka ‘dh’da ku hadlaase u baahan yihiin laba-laabidda ‘dh’da si ay u kala soocaan ‘dh’da culus iyo ‘dh’da fudud. Laba-laabidda ‘dh’du maanta ma aha arrin fudud, maxaa yeelay, hindisaha hore ee qoraalka oo ‘dh’da u gartay wada-jirka labada xaraf ‘d’ iyo ‘h’ ayaan tix gelin in ‘dh’du laba laabanto. Sida Afku u qoran yahay maantana waxa uu khasbayaa in laba-laabidda ‘dh’du u qormo ‘dhdh’ taas oo aan noola muuqan wax la aqbali karo. Waxa beegan oo ay nala tahay in dadka qoraalka Afka daneeyaa arrinta ka geystaan talooyin si ay u suurtowdo in xarafka ‘dh’ si hawl yar u laba laabmo.
In xarafka ‘dh’ u laba laabmo dadka ku hadla ‘dh’da, sida aannu horeba u sheegney, shaki kuma jiro. Tusaalena waxa innoogu filan: Fadhiiso oo ‘dh’ fudud ah, dadka ‘r’da ku hadlaana u qoraan fariiso iyo fadhdhi oo ‘dh’ culus ah, dadka ‘r’da ku hadlaana u qoro fadhi; in kasta oo ay nala tahay in iyaga qudh dhoodu u qori karaan fadhdhi, kol haddii si loogu wada dhawaaqayo, looguna dhawaaqayo fadh-dhi ee aan loogu dhawaaqayn fa-dhi. Tusaale kalena waxa weeye: Fadhi maayo oo macne heedu yahay qodi maayo ama baadhbaadhi maayo oo ‘dh’ fudud ah, dadka ‘r’da ku hadlaana u qoraan fari maayo iyo fadhdhi oo ‘dh’ culus ah, horena aannu u taabannay. Waxa isna jira ereyga cadho oo macni hiisu yahay xanaaq oo ‘dh’ fudud ah, dadka ‘r’da ku hadlaana u qoro ‘caro’ iyo ereyga ‘cadhdho’ oo ‘dh’ culus ah, macna hiisuna yahay cudur ku dhaca jidhka. Ereyada innoo muujinaya in ‘dh’du laba laabanto waa badan yihiin sida: aan gaadho, aan baadho, aan saydho oo dhammaan ‘dh’ fudud ah iyo aad gaadhdho, aad baadhdho aad saydhdho, oo ‘dh’ culus wada ah, loona akhriyayo: aad gaadh-dho, aad baadh-dho, aad saydh-dho, lagana dhigi karo sida saxa ah: aad gaadhto, aad baadhto, aad saydhto.
Xarafka ‘y’ ayaannu isagana laba laabnay. Marar badan oo ay nala noqotay in uu laba-laabid u baahan yahayna waannu ka deynnay si aannaan buugga akhris kiisa u gelin dhibaato. Meelaha aannu ka fursan weyney ‘y’da laba-laab keeda waxa ka mid ah: erey, ereyyo oo loogu dhawaaqayo erey-yo, iyada oo ‘yo’da xagga danbe tilmaameysa jamac, sida balli, balliyo. Wayna nala toosnaan weydey in ereyga loo qoro sida faaftay ee ah: ereyo oo loogu dhawaaqayo ereyo. Horta wax ‘ere’ la yidhaahdaaba ma jiro. Haddii si daas la yeelona waxa ay nala tahay in ereygii si xun loo qalay oo laga tegey xaraf ka mid ah asalka ereyga, kaas oo ah xarafka ‘y’.
Ereyyada kale ee arrin taas la xidhiidha waxa ka mid ah: gabay, gabayyo, gabayyaa; odey, odeyyo, odeyyaal; looguna dhawaaqayo gabay-yo, gabay-yaa; odey-yo, odey-yaal. Ereyga fule ama fuley hadba sida loo yaqaan, oo macna hiisu yahay qofka cabsada marka uu yahay jamac waxa loo qorayaa laba siyood oo ku xidhan hadba sida qofku u yaqaan ereyga – Fule, fuleyaal; fuley, fuleyyaal.
Xuruufta ‘q’, ‘c’, ‘x’ iyo ‘h’, iyaguna waa laba laabmaan, gaar ahaan marka ay ugu danbeeyaan magac lab sida: xaq, faq, naq, baaq, baac, sac, laac, guux, foox, loox, rah, daah oo goorta la raaciyo qodobka caddeynta u qormaya: xaqqa, faqqa, naqqa, baaqqa, baacca, sacca, laacca, guuxxa, fooxxa, looxxa, rahha, daahha; looguna dhawaaqayo: xaq-qa, faq-qa, naq-qa, baaq-qa, baac-ca, sac-ca, laac-ca, guux-xa, foox-xa, loox-xa, rah-ha, daah¬ha. Ereyyada kor ku xusan marka lagu xidhiidhiyo ’tilmaan lahaansho’ sida: kayga, kiisa, keeda, tayda, teeda iwm, waxa ay u qormayaan sidan:
xaq, xaqqa, xaq qeeda, xaq qayga, xaq qaaga, xaq qiisa.
sac, sacca, sac ceeda, sac cayga, sac caaga, sac ciisa.
loox, looxxa, looxxeeda, looxxayga, looxxaaga, looxxiisa.
daah, daahha, daah heeda, daah hayga, daah haaga, daah hiisa.
Marka ereyga loo qoro sida kor ku tilmaaman oo la kala reebo magacca iyo tilmaanta lahaansho, waxa meelsha ka baxaya ereyyadii dhaadheeraa ee qoraalka iyo akhriskaba ku ahaa dhibaato. Guud ahaan waxa ay nala tahay in ay laba laabmaan xuruuf ka badan kuwii la yidhi waa ay laba laabmaan. Waxa ay nala tahay waqti gan la joogo in la sheego xuruufta la hubo in aanay laba laabmin oo keli ah, kuwa kalena loo dhaafo hadba sida aqoontu u korodhto. Ilaa imminkana waxa aannu odhan karnaa, malaha ‘k’ da iyo ‘t’ da oo aan si doodaba ereyga Soomaaligu ku dhammaan ayaan u baahnayn laba-laabid, in kasta oo odhaah daas qudh dheeda laga doodi karo.
Xuruufta laba laabanta ee aannu hore uga faalloonay ka sokow, waxa jira marar badan oo falku ku dhammaado ‘y’ oo aannu laba laabnay ‘n’da ka danbeysa ‘y’da marka qofka kowaad ee jamacca ahi hadlayo sida: hay, aannu haynno; lay (laa), aannu laynno; ray, aannu raynno; goy (goo), aannu goynno; gey (gee), aannu geynno; qoy (qoo), aannu qoynno; hoy (hoo), aannu hoynno; iyada oo aannaan laba laabin kuwa kale: cay, aannu cayno; day, aannu dayno; dhay, aannu dhayno; qoy, aannu qoyno. Waqti ganna wax badan kama odhan karno sababta ‘n’du u laba laabantay qaybta hore, qaybta danbese u laba laabmi weydey. Qaybta hore magacyada ka sameysmaa waa: hayn, layn, rayn, goyn, geyn, qoyn iyo hoyn, iyada oo ‘no’ danbena tilmaameysa qofka kowaad ee jamacca ah (Annaga ama Innaga). Qaybta labaad magacyada ka sameysmaa waa: caayid, dayid, dhayid, qoyid. Arrinta ka-faallood keedu waa mid u taal culimada qoraalka Afka iyo ciddii kale ee daneysa.
In taas waxa noo raaca oo aannu soo qaadeynaa falal badan oo ku dhammaada xarafka’d’, sida: gad, qaad, shid, jiid, iwm. Laba siyood baannu u isticmaaleynaa fal kasta si aannu u muujinno ujeeddada aannu ka leenahay: way gadday, way gadatay; way qaadday, way qaadatay; way shidday, way shidatay; way jiidday, way jiidatay. Ujeeddada yaduna waxa weeye goorta falka loo isticmaalo sida labaad, laguna isticmaalo qofka saddexaad ee jamac ah (iyaga); ama qofka saddexaad ee keli ah ee lab (isaga); ama qofka kowaad ee keli ah (aniga). Tusaale ahaan haddii aannu u qaadanno qofka kowaad ee keli ah, waxa aannu aragnay in sida faaftay ee falal kaas loo qoraa tahay: waan gatay oo qaatay. Markii aan ka jiitay meelshii aan ka gatay, baan dab shitay. Annagase waa nala noqon weydey in qoraalka falalku si daas yahay. Iyada oo lagu dhawaaqo mooyaane, ereyyada laguma suureyn karo falalka ay ka yimaaddeen ee ah: gad, qaad, shid, iyo jiid.
Sababtu waxa weeye iyada oo laga tegey xaraf ka badh ah ereyga, oo la’aantiis aan ereygu macne yeelan karin, kaas oo ah xarafka ‘d’. Waxay nala tahay in aan xaraf shibbane ahi lumi karin, wuuse isbeddeli karaa sida: ‘n’ iyo ‘m’, la isku beddelo; ‘b’ iyo ‘w’, la isku beddelo; ‘g’ iyo ‘k’ la isku beddelo. Xaraf shaqal ahise waa lumi karaa. Si daas dar teed, falalka qoraal kooda iyo dhawaaq qooduba waxa ay noqonayaan: waan gadtay oo qaadtay. Markii aan ka jiidtay meelshii aan ka gadtay baan dab shidtay ‘d’da dhawaaq qeedu haddii uu aammusan yahay waxba kuma jabna. Lagamase tegi karo, bay nala tahay.
Faallada la xidhiidhta qoraalka Afka waxa aannu ku soo gebagebeeneynaa ereyyo kale oo iyana qoraal koodu nagu adkaaday; sida faaftay ee loo qoraana na qancin weydey. Ereyya daasi waxay ku dhammaadaan xarafka T. Qaar waa falal sida: hel, dil, fil, iwm; qaarka kalena waa magacyo dheddig sida: Hal, meel, beel, fool iwm.
Falalka haddii aannu ku horreynno, dhibaatada nala kulantay waxa weeye sida falku u qormayo goorta lagu isticmaalo: qofka labaad ee keli ah ama jamac ah (adiga iyo idinka) iyo qofka saddexaad ee keli ah ee dheddig (iyada). Sida faaftay, falka ‘hel’ marka lagu isticmaalo qofaf kaas aannu kor ku sheegnay waxa loo qoraa sidan: waad heshay, (adigu); waa aydin hesheen (idinku); way heshay, (iyadu).
Waxa meelsha ka baxay xarafka ‘l’ oo falka ‘hel’ aanu ka maarmin. Waxa la lumiyey xaraf shibbane ah oo ay tahay in aanu lumin, sida aannu hore u sheegnay. Waxa ay nala tahay in aan qoraal kaasi toosneyn, oo erey yadaasi u qormayaan sidan: waad helshay (adigu); waa aydin helsheen (idinku); way helshay (iyadu). Aamusnaanta ‘l’du waxba ma dhimeyso. Waxaase lagama maarmaan ah in ay joogto oo aan la lumin.
Magacyada dheddig ee ku dhammaada xarafka ‘l’ waxay la mid yihiin falalka oo iyagana waxa laga lumiyaa ‘l’da goorta lagu xidhiidhiyo qodobka caddeynta oo ah ‘sha’da. Waxa faaftay in magacya daas loo qoro sidan: hal, hasha; meel, meesha; beel, beesha; fool, foosha; iwm. Sidii hore oo kale waxa la lumiyey xarafka ‘l’da oo ka tirsan asaaska ereyga. Waxa ay nala tahay in qoraalka ereyya daasi noqdo sidan: hal, halsha; meel, meelsha; beel, beelsha; fool, foolsha. Aamusnaanta ‘l’du waxba ma dhimeyso oo ‘sha’da ayaa la xoojinayaa ama la shedayaa; waase in ay joogto oo aanay lumin.
Faalla daas dheer ee ku saabsan qoraalka Afka ugama jeedno in aannu cid ku xumeynno, ama aannu sheeganno aqoon aannaan lahayn. Ujeeddada aannu ka leenahay faallada waa laba: Ujeeddada kowaad waxa ay tahay in aannu uga sii digno dadka akhriyaya buugga in ay kala duwan yihiin sida ay u qoraan ereyyada qaar kood iyo sida aannu u qornay. Maskax dayaduna waa u furan tahay cid kasta oo nagu baraarujisa gef aannu galnay, annaga oo fileyna in gefaf badani ku jiraan.
Ujeeddada labaad ee aannu ka leenahay faallada qoraalka Afka waxa weeye in aannu ku baraarujinno inta xiiseysa qoraalka Afka oo ay ku jiraan mas’uuliinta, culimada Afka, wargeysyada iyo dadweynuhuba in qoraalka Afku yahay bilow weli ceedhiin, hore-u-marin tiisuna u baahan tahay hawl aan yarayn.
Ugu danbeyntiina waxa aannu qireynaa kaalinta weyn ee soo-saaridda buugga ay ka qaadteen Qaalib Muuse Caafi, Axmed Zaki Guuleed iyo Cabdillaahi Cabdi Axmed oo dhammaan tood waqti badan ku lumiyey; talooyin iyo toostoosin aan la qiimeyn karin oo xagga Afka ahna noo geystay.
M. Y. Cartan
REDSEA-ONLINE.COM Culture Foundation
Fidiyaha Aqoonta iyo Ereyga Dhigan – Xarunta Dhexe
Daarta Oriental Hotel – Hargeysa, Somaliland
Telephone: 00 252 2 525109 | 00 252 2 4299088
Inquiries to the editor
email: editor@redsea-online.com | editor@ponteinvisibile.com
Published with permission given by the wife of George Orwell to M Y Cartan.
Translation – Copyright © Maxamed Yuusuf Cartan
Printed with permission of late Maxamed Yuusuf Cartan’s family.
Published by Ponte Invisibile (redsea-online), 2011, Pisa
Second Edition (and the First Edition of Ponte Invisibile) 2011
Copyright © Ponte Invisibile Edizioni 2011
A REDSEA-ONLINE Publishing Group Company.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocoping, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.
Suggested classification for the librarians
Beertii Xayawaanka/ Joorj Orwel (in English George Orwell)
pp. 138 cm. 14×21
ISBN 88-88934-20-0 EAN 9788888934204
I. Beertii Xayawaanka II. / Joorj Orwel (translated by Mohamed Yuusuf Cartan) / III. Literature / Fiction.
Waxa lagu saxay Ubbo – Quraar iyo Higgaadshe kuu saxa af Soomaaliga. Qaybta buugga ee sheekada waxa loo daayay higgaaddii uu qoraagu ka tagay inkasta oo aanay sax ku ahayn xeerka maanta ee higgaadda Af Soomaaliga. Ka eeg www.redsea-online.com/ubbo
Fasax ay bixisay afadii Orwel ka tegey ayaa buugga lagu soo saaray. Daabacaadda turjuman waxa laga helay fasax ehelkii turjumaaga.
Lama guurin karo, lamana sawiri karo qayb ka mid ah buugga ama buugga dhammaantiiba, iyada oo la helo oggolaanshaha ninka buugga tarjumay mooyaane. Gal aan ahayn kan uu ku soo baxay lama gelin karo.
Waxa lagu daabacay:
Madbacadaha Al Ahraam, Qaahira
Pont Invisibile Ed (redsea-online.com), Pisa,
Waxa lagama maarmaan ah in la sheego Af-Soomaaliga ay ku dhigan tahay sheekadani. Turjumaha buuggu waxa uu qorey dhiganahan iyada oo aan wali qoraalka Af-Soomaaliga si rasmi ah loo taabbagelin sharciyadiisa aynu maanta adeegsanno. Soo saare ahaan waxa aannu door bidnay in tixgelin aan siinno qoraalkii asalka ahaa ee uu ka tagay Alle ha u naxariistee Maxamed Yuusuf Cartan, isla markaana annaga oo ogsoon in sharciyada higgaadda Af-Soomaaliga ee maanta aanay meelo badani ku saxnayn, waxa aannu u badheedhnay in aannu sidiisa ku daabacno. Hordhaca uu turjumuhu ka qorey dhigista Af-Soomaaliga waxa kale oo ay ka marag kacaysaa xasillooni darrada wali haysata dhigista Af-Soomaaliga, iyo baahida rasmiga ah ee loo qabo in mar kale la is hor fadhiisto oo dib loo eego sharciyada higgaadda ee Af- Soomaaliga.
Hordhac – Maxamed Yuusuf Cartan
Beerta Xayawaanka – Joorj Orwel (waxa turjumay Maxamed Yuusuf Cartan)
Bayaamin daabacaadda labaad – Jaamac Muuse Jaamac
Dabadhah: Kuma ayuu ahaa Maxamed Yuusuf Cartan?